Gaambe “Kheyre iyo Axmed Madobe waan wada hadalsiiyay" shirka Nairobi danteena ayaan ka aragnaa - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Gaambe “Kheyre iyo Axmed Madobe waan wada hadalsiiyay” shirka Nairobi danteena ayaan...
Ninka ay ehelka iyo shirkada yiihin Xasan Kheyre, Cabdikariin Maxamed Siyaad (Gaambe) iyo Xildhibaan Xuseen Iidow oo hada ku sugan magalaada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maalmihii u danbeeyay waxa ay ku mashquulsanayeen sidii ay isugu xiri lahaayeen Axmad Madoobe iyo Xasan Kheyre. Talaabadaan ayaa ahayd mid uu ka soo shaqeeyay Xasan Kheyre oo isagu doonayo in uu iska fogeeyo fashilkii ka dhashay dagaalkii siyaasadeed ee lagu qaaday shacabka iyo dowlada Jubbaland.
Kheyre ayaa u sheegay beesha Caalamka iyo ganacsatada beesha Ogaadeen in dhibkii ka dhacay Jubbaland uu mas’uuliyadeeda leeyahay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, isaga oo si beel ahaan ah ula dagaashan beesha Ogaadeen oo hadda haysa hogaanka Jubbaland. Safarka Cabdikarin Gaambe iyo Xuseen Iidow ayaa waxaa ka soo shaqeeyay lacagna ku bixiyay Xasan Kheyre.
Xildhibaan Maxamed Jama Mursal oo loo yaqaano Geelle oo ka soo jeeda beesha Cawlyahan, kana mida ahaan jiray dadka ku dhow-dhow Axmad Madoobe laakiin hada kamid noqday kooxaha uu Xasan Kheyre Mushaarka joogtada ah siiyo, isla markaana uu ku adeegto, ayaa waxa uu ka shaqeeyay in uu isku xiro Madaxweyne Axmad Madoobe iyo Xasan Kheyre.
Maalintii Jimcaha oo bisha Abril ahayd 3da, galabnimadii ayaa Xildhibaan Geelle oo wado Ganacsade Cabdikarin Gaambe iyo Xildhibaan Xuseen Iidow waxa uu geeyay Hotelka uu Madaxweyne Axmad Madoobe ka degaanaa Naiorbi. Ka mid markii ay in mudo ah sugaayeen Axmad Madoobe oo ku jiray kulamo kala duwan, ayaa waxaa uu Gaanbe la fariistay Axmad Madoobe isaga oo durbadiiba Taleefanka u dhiibay Xasan Kheyre oo qadka horay ugu jiray.
Sida MOL loo xaqiiyay, Xasan Kheyre ayaa u sheegay Axmad Madoobe, in uu raali ka yahay shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Nairobi ee u dhaxeeya isaga iyo Seeraar/Xidig. Waxa kaloo sheegay in uu beesha caalamka u sheegay waxa uu ku tilmaamay “guusha aad ka soo hoysay”wadahadalka mucaaradka.
“ .. waxaan filayaa inay beesha caalamka ku soo waceen, horta-ma ku soo waceen madaxweyne, ogow aniga ayaa ka soo shaqeeyay howshaas, waxaana u sheegay in ay si buuxda u taageeraan heshiiska labada dhinac.. marka aad go’aanka gaartaan, waxaan kuu sheegayaa in ay qoraal soo saari doonaan oo ay ku taageerayaan shirka, ee horta ku bishaareyso” ayuu yiri Xasan Kheyre oo iska fogaynaya Farmaajo.
Axmad Madobe oo ay ka muuqato in uu dhibsanayo dhagaysiga beenta uu sheegayo Xasan Kheyre ayaa yiri “.. oo may xukumadaada iyadu soo saarto qoraalada aad sheegayso in beesha caalamka soo saarayso, oo aan ayan jirin waxa dan ah oo ay ka leeyihiin dalkeena”.
Kheyre ayaa waxaa uu sheegay in isagu uu jeclaan lahaa diyaarna u yahay in uu qoraal ka soo saaro dib u heshiisiinta Nairobi laakiinse uu “nin waalan” ku xiran yahay oo aan doonaynin nabadda reer Jubbalad.
“.. madaxweyne waad ogtahay ninka igu xariiro, ma aha nin rabo nabad iyo heshiis, waxa kaliya ee u muuqdaa waa dagaal, kun mar ayaan kala hadlay arintaan… waxaana ku sigtay in aanba isceliso , …. hade kuu sheegi maayo adigaba waa taqaan Farmaajo ” ayuu ugu jawaabay Kheyre su’aashii Axmad Madoobe sida tooska ah uu u weydiiyay.